Ny tsy fahombiazan'ny mekanika amin'ny lakilen'ny habaka MacBook 12 | Avy amin'ny mac aho
Tsy tsiambaratelo na iza na iza intsony ny hoe ilay vaovao sy nohavaozina MacBook 12-inch Apple dia manana klavie vaovao misy lakile lehibe kokoa izay misy rafitra lolo lolo mekanika vaovao izay mahatonga ny lakileny hanakaiky kokoa ny velaran'ny keyboard, tsy dia mitabataba izy ireo ary Mandritra izany fotoana izany dia avelao ny keyboard ho mahia, manohina ny hatevin'ny farany ny solosaina.
Na izany aza, tsy ny rehetra no dera ho an'ity fitendry vaovao ity ary ny mpampiasa sasany dia nitatitra bibikely tao amin'ny presse an'ny bara habakabaka. Fahavoazana mekanika izay tsy mitranga amin'ny MacBook rehetra ary mampitaraina ny tompony momba azy io.
Toa misy mpampiasa sasany rehefa manoratra amin'ny MacBook 12-mirefy izy ireo no mijaly noho ny lesoka amin'ny fanindry ny lakilen'ny habaka ka raha voatsindry ny sisiny fampidirana habaka tsy mitranga ao amin'ilay lahatsoratra notendrena. Notaterin'izy ireo fa ny fanindriana ny lakilen'ny afovoany afovoany dia ny rehefa mandeha tsara tanteraka.
Izany no antony nitodihan'izy ireo tany amin'i Apple hanome ny fitarainany satria raha te hampiasa tsara ny fitendry dia tsy maintsy nanova ny fahazaran'izy ireo amin'ny fanindriana ny lakilen'ny habakabaka izy ireo. Ny mazava dia ity olana Apple ity dia tsy ho afaka hamaha amin'ny fanavaozana ny rafitra satria antony mekanika izany. Tsy maintsy miandry isika vao hahita izay fanapahan-kevitr'i Apple momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook » Famosaviana mekanika eo amin'ny lakilen'ny habakabaka amin'ny MacBooks 12-inch
hunter325 dia hoy izy:
Tsara vintana aho ary tamin'ny volamenako dia miasa tsara ny habakabaka amin'ny toerana rehetra.
Maqui dia hoy izy:
Ny fanapahan-kevitr'i Apple? Manitsy aho, ny fanapahan-kevitry ny iray ho mpanjifa! Na mangataka famerenam-bola ianao na ny fifanakalozana ny fitaovana nefa hitan'i Apple ny antony tsy nahombiazany, hoy aho satria nitranga tamiko io modely vaovao io.
Valiny tamin'i Maqui
Pauline dia hoy izy:
Novako in-2 ny bara habakabaka ary mitohy ny olako .. efa tapitra ny antoka, ka toa tsy misy vahaolana.
fanafihana dia hoy izy:
Eny, mitranga amiko io ary manana antoka aho saingy lazain'izy ireo amiko fa mila 1 volana aho hanamboarana azy ary mandritra izany ?????